Wed, Jul 8, 2020 at 1:01am
यसकारण तिर्नुपर्ने भयो नेपाल टेलिकमले २० अर्ब
काठमाडौँ, १७ जेठ । नेपाल टेलिकमले दोस्रो पटकका लागि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैया तिर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णयअनुसार कम्पनीले दोस्रो पटकको लाइसेन्स नवीकरणवापत यो रकम तिर्नुपर्ने भएको हो। लाइसेन्सका शर्तमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएपछि पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक पाँच पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री..
स्वदेशी उद्योग जोगाउन संरक्षणकारी नीति, बजेटमा केही वस्तुको आयातमा कडाइ
काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायलाई जोगाउनका लागि संरक्षणकारी नीति अख्तियार गरेको छ । आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग तथा उत्पादनलाई बढावा दिन र त्यस्ता उद्योगको विकास र विस्तारका लागि त्यस्तो नीति लिएको हो । देशमा क्रमशः अनऔद्योगिकीकरणको अवस्था सिर्जना भएकाले पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस्तो नीति लिएको हो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आव २०७६-७७ को..
बजेटले बाँकेबासी उत्साहित, १० ठूला आयोजना प्राथमिकतामा
बाँके, १६ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमा बाँके जिल्लालाई लक्षित गरी विभिन्न १० ठूला आयोजना प्राथमिकतामा परेपछि जिल्लावासी उत्साहित भएका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा बाँकेलाई लक्षित गरी विभिन्न १० ठूला आयोजना प्राथमिकतामा परेसँगै उनीहरु उत्साहित भएका हुन् । प्रदेश राजधानीको सम्भावना टाढिएपछि निराश बनेका बाँकेबासीले सङ्घीय सरकारले संसद्मा बुधबार पेश गरेको बजेट सकारात्मक रहेको..
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब, यस्तो छ दुई तिहाई सरकारको दोस्रो बजेट
काठमाडौँ, १५ जेठ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति टेबुल गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार साँझ बसेको वैठकमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्व र व्ययको वार्षिक बजेटको प्रति टेबुल गर्नुभएको हो । सरकारद्वारा बुधबार प्रस्तुत उक्त आयव्ययमाथि प्रतिनिधिसभा यही जेठ १९, २० र २१ गतेको बैठकमा छलफलका लागि दिन तोकिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकमा जानकारी..
आगामी आवको बजेट १५ खर्ब ३३ अर्ब, रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी वित्तीय..
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा कर्मचारीको २० प्रतिशत तलब वृद्धि
काठमाडौँ, १५ जेठ नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । बुधबार सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर्मचारीको शुरु तलबमानमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीका २० प्रतिशत र राजपत्राङ्कितको १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापकको तलब..
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ७ अर्ब ३९ करोड !
काठमाडौँ, १५ जेठ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आव २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले मेलम्ची आयोजनालाई सात अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै सोही आयोजनाको दोस्रो खण्डको समेत प्रक्रिया शुरु गरिने भएको छ । इटालीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले..
अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट प्रस्तुति शुरु, विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने
काठमाडौँ, १५ जेठ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७६-२०७७ वर्षका लागि आयव्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्न शुरु गर्नुभएको छ । नेपालको संविधान, कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, विभिन्न अध्ययन कार्यदलका सुझावका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सभ्य र सुसंस्कृत समाजवादोन्मुख बजेट तयार गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बैठकलाई जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको..
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ - ४ बजे बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत हुँदै, यी हुन् विशेषता
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट पेस गर्नुहुनेछ । नेपालको संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि दिउँसो २ बजे बस्ने राष्ट्रिय योजना..
बुधबार आगामी आवको बजेट - ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा
काठमाडौँ, १४ जेठ । सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट पेस गर्नुहुनेछ । नेपालको संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले दोस्रो..
विराटनगर, १४ जेठ । विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिसहितको पूर्वबजेट सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८ को उपनियम २ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत विषयमा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद..
यार्सागुम्बाबाट अघिल्लो भन्दा २६ प्रतिशत बढी राजश्व, ७० भन्दा धेरै यार्सापाटनहरू खुला
जाजरकोट , १४ जेठ । शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोल्पाले २६ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो भन्दा यो वर्ष यार्सागुम्बा सङ्कलनकर्ताबाट राजश्व बढी उठेको हो । जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायसहितको सर्वपक्षीय निर्णयअनुसार जेठ १३ देखि भोक्पा, भाङ्का, कुनास, सागबारीलगायत ७० भन्दा धेरै यार्सापाटनहरू औपचारिक रूपमा खुलिसकेको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी छत्र खड्काले जानकारी दिनुभयो । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने धो मा..
आर्थिक सर्वेक्षण - ३ खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु, चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलन घाटामा
काठमाडौँ, १४ जेठ । विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायले समयमै बेरुजु फछ्र्योट नगर्दा बेरुजुको रकममा अधिक वृद्धि भइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम रु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको सरकारले बताएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र संस्थान समेतबाट उक्त रकम फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । छब्बीस..
मागको ९० प्रतिशत सिमेण्ट नेपालमै उत्पादन, आयातमा कमी, यस्तो छ तथ्यांक !
काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा मागको ९० प्रतिशत सिमेण्ट नेपालमा नै उत्पादन भइरहेको जनाइएको छ । सिमेण्ट उद्योगको विकास तथा सञ्चालनमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भई वार्षिक ४५ लाख टन सिमेण्ट उत्पादन भई मागको ९० प्रतिशत सिमेण्ट स्वदेशमै उत्पादन भई सिमेण्टको आयातमा कमी आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म २० हजार..
स्थानीय कच्चापदार्थको प्रयोग हुने गरी गण्डकी प्रदेशमा १ सय ७५ उद्योग खोलिने
पोखरा, १३ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा १७५ उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सोमबार यहाँ आयोजित ‘गण्डकी प्रदेशमा निर्यात सम्भावना, आयात प्रतिस्थापन तथा अन्तर प्रादेशिक प्रोफाइल प्रतिवेदन तयारी’ विषयक गोष्ठीमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले आगामी आवभित्रै हिमालमा २५, पहाडमा ५० र तराईमा एक सय उद्योग..
सरकारको दाबी : आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, १ खर्ब ७ अर्बको वैदेशिक सहायता
काठमाडौँ, १३ जेठ । चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ बरारबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् । सोमबार संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७५–०७६ का प्रमुख बुँदा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशित पुग्ने दाबी गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक,..
आर्थिक सर्वेक्षण र संस्थानहरुको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक, के छ नीति ?
काठमाडौं, १३ जेठ । सरकारले सोमबार आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनासम्मको तथ्यांकमा आधारित आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्नेछ। सरकारले सोमबार आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिले प्रतिनिधिसभा बैठक र त्यसलगत्तै राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारका दुई प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका हुन् । विभिन्न निकायले यसअघि प्रकाशन गरेकै तथ्यांकमा आधारित रहेर सर्वेक्षण प्रकाशित हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण वितरणका..
बजेट सकस : राजश्व परामर्श समितिले बुझायो प्रतिवेदन, सुधार गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडाैँ, १२ जेठ । आर्थिक वर्ष ७६-७७को बजेटमा समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ । सरकारले विगतको वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढाएर करिब १५ खर्ब विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट आउन तीन दिन बाँकी हुँदा राजश्व परामर्श समितिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हो । समितिले सरोकारवालासँगको विभिन्न..
मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले गर्‍यो ९१ करोड ७४ लाखको आम्दानी
भक्तपुर, १२ जेठ मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले चालू आव २०७५–७६ मा रु ९१ करोड ७४ लाख ४१ हजार आम्दानी गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदबहालीको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिँदै दोस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत कूल बजेटमा वैशाख मसान्तसम्म ७७.७५ प्रतिशत आम्दानी गर्न सफल भएको बताउनुभयो । नगरपालिकाले आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट रु ११ करोड..
यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनुमति खुला, स्थायी ठेगानाका आधारमा प्रवेश शुल्क
जाजरकोट, ११ जेठ । जेठ १३ मा यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनुमति खुला गरिने भएपछि शुक्रबारदेखि प्रवेश शुल्क लिएर प्रवेश दिन शुरु गरिएको छ । स्थायी ठेगाना खुल्ने प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र प्रवेश शुल्क लिएर यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न प्रवेश दिइएको छ । शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले शुक्रबारबाट प्रवेश शुल्कबापत् मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका सर्वसाधारणका लागि रु ५००, मध्यवर्ती क्षेत्रबाहेक जिल्लाभित्रका सर्वसाधारणका लागि रु दुई हजार र..
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ३ तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय सहमति
काठमाडौँ, १० जेठ बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सञ्चालन ल्याइएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय, ३ नं प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी भएको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाल, प्रदेश नं ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिपेन्द्र सुवेदी र सम्बन्धित स्थानीय..
काठमाडौँ, १० जेठ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा सधैँ सहज विद्युत् आपूर्तिका लागि चुनौती हुन्थ्यो । स्थानीयवासीको एउटै गुनासो हुन्थ्यो–प्राधिकरणले हामीलाई सौतेलो व्यवहार गर्यो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराएन । लामो प्रसारण लाइनका कारण सामान्य हावा हुरी चल्दा पनि विद्युत् प्रवाह काटिँदा मोबाइल फोन चार्ज गर्नसमेत समस्या हुने गरेको थियो । स्थानीयवासीले राजापुर क्षेत्रमा नै सबस्टेशन निर्माण गरिदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा..
डोटी जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहले गाडी किन्नमै सके ११ करोड
डोटी, १० जेठ जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहले डेढ वर्षको अवधिमा गाडी खरिदमा झण्डै रु ११ करोड खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि २०७४ साउनदेखि २०७५ चैत महिनासम्मको अवधिमा रु १० करोड ९३ लाख ८६ हजार ८२९ रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरिएको छ । गाडी खरिदमा सबैभन्दा धेरै खर्च पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले गरेको पाइएको छ । यो गाउँपालिकाले दीपायल सिलगढी..
मानसरोवर दर्शनका लागि हिडेका भारतीय तीर्थयात्रीबाट ८ लाख राजश्व सङ्कलन
हुम्ला, १० जेठ । हुम्लामा गत शनिबारबाट कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि भारतीय तीर्थयात्री सिमकोटमा भित्रिन शुरु भएको छ । हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा नाका हुँदै वर्षेनी हजाराँै तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्नका लागि हुम्ला पुग्ने गर्दछन् । पहिलो दिन शनिबार हवाईमार्गबाट नेपालगञ्ज हुँदै ७१ भारतीय तीर्थयात्री सिमकोट पुगेका थिए । शनिबारदेखि बिहीबारसम्म नेपालगञ्ज हुँदै कैलाश मानसरोवर दर्शन यात्राका लागि सिमकोटमा ३३२ महिला र ४०१..
धनुषा, ९ गते जेठ । प्रदेश नं २ का समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफूहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट नदिए आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । सरकारले प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई मात्रै बजेट उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले योजना छनोट गर्न पाउने गरी रु एक करोड दिने निर्णय गरेको थियो । सो..
पुरानै सोचले समृद्ध नेपाल बन्न सम्भव छैनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
काठमाडौँ, ९ जेठ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालमा जग्गाको मुल्यमा नियमन नगर्ने हो भने देश औद्योगिकरण र विकासको दिशामा अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ । ‘नेपालमा कायम रहेको भूमिव्यवस्थाले कृषि, उद्योग, जलविद्युत वा ठूला होटलहरू वन्ने सम्भावना कम छ, अव भूमिको वर्गिकरण गरि नयाँ व्यवस्था कायम नगरेसम्म पुरानै योजना र सोचले समृद्ध नेपाल बन्न सम्भव छैन’ पाण्डेले..
उद्यमी बन्न चाहन्छन् वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा, १० लाख बढी कर्जा माग
काठमाडौं, ८ जेठ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अधिकांश युवा सहुलियत कर्जा लिएर उद्यमी बन्न आकाङ्क्षी देखिएका छन् । सहुलियत कर्जा लिन वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सूचीकृत भएकामध्ये सबैभन्दा बढी युवाले उद्योग-व्यवसाय गरी स्वरोजगार हुन चाहेका छन् । बोर्डले सहुलियत कर्जाका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १८ हजार ७६७ युवालाई सूचीकृत गरेको छ । आवेदन दिएकामध्ये चार हजार ७४७ युवाले कुनै न कुनै प्रकारको उद्योगधन्दा स्थापना..
भूमिको उपयोग उत्पादन वृद्धिका लागि हुनुपर्छः उद्योगी चौधरी
काठमाडौं, ८ जेठ । सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले देशको आर्थिक विकासको लक्ष्यसँग जोडेर भूमि सम्वन्धी कानून निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा भूमि सम्वन्धी आठौँ संसोधन विधेयकमाथि मंगलबार आफ्नो धारणा राख्दै चौधरीले भुमिको उपयोग उत्पादन वृद्धिका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लगानीकर्ताले उद्योगका लागि लिएको जग्गामा कदापी घर बनाएर बस्दैन । उत्पादन बढाउनकै लागि उसले त्यो जमिनको..
विदेशबाट फर्केका युवालाई बोर्डको अनुरोध - सहुलियत कर्जा लिन बैंकमा जानू !
काठमाडौँ, ७ जेठ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । बोर्डले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सहुलियत कर्जा लिन सूचीकृत भएका युवालाई आफूले पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजनासहित पायक पर्ने वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई विदेशमा सिकेका सीप..
नेपाल राष्ट्र बैंक - ९ महीनामा ६ खर्ब ५३ अर्ब रेमिटेन्स भित्रियो
काठमाडौँ, ७ जेठ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकले चालू आर्थिक वर्षको नौ महीनामा रु छ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड बराबरको विप्रेषण पठाएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह गत आवको तुलनामा चालू आवको नौ महीनामा २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा भएको मूल्य वृद्धिले विप्रेषण आप्रवाह..
Results 1679: You are at page 21 of 56